အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း စက်ရုံ
Big Scale အသေးစားစက်မှုလုပ်ငန်း Pasta Macaroni ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများ- အာမခံချက်ပြီးနောက် ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ- ဗီဒီယိုနည်းပညာပံ့ပိုးမှု အမျိုးအစား- ခေါက်ဆွဲထုတ်လုပ်မှု စွမ်းရည်- 0.2tons–1tons/hour မူလနေရာ- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS ဗို့အား- 380V/50HZ ပါဝါ- 240kw Dimension(L* W*H): 40m*3m*3m အလေးချိန်- 10 တန် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO9001:2008 အာမခံ- 1 နှစ် စက်ယန္တရားစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ- ပံ့ပိုးထားသော ဗီဒီယိုအထွက်-စစ်ဆေးရေး- အာမခံချက် ကော်...
အာလူးကြော်များ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ထိရောက်မှု မြင့်မားသော ပြင်သစ်ကြော် ထုတ်လုပ်မှု စက်ပစ္စည်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
အာလူးကြော်များ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် ပြင်သစ်ကြော် ထုတ်လုပ်မှု စက်ယန္တရား ကုန်ပစ္စည်း ဖော်ပြချက် အလိုအလျောက် အာလူးကြော် ပြုလုပ်သည့် စက်သည် အလယ်အလတ်နှင့် ကြီးမားသော အာလူးကြော် ပြုပြင်သည့် စက်ရုံလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။စက်ကိရိယာလည်ပတ်မှု ရိုးရှင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အလုပ်သမား6ယောက် လုံလောက်ပါတယ်။အလိုအလျောက် အာလူးကြော်များ ပြုလုပ်ခြင်း စက် ထုတ်လုပ်မှု စီးဆင်းမှု ကုန်ကြမ်း - ဓာတ်လှေကား - ရေဆေးခြင်း - အခွံခွာခြင်း - ခူးဆွတ်ခြင်း - လှီးဖြတ်ခြင်း ...
ပြီးပြည့်စုံသော Avocado Oil Press Line Most Economical Oil Presser Avocado Rapeseed Oil Press Machine
ပြီးပြည့်စုံသော Avocado Oil Press Line Most Economical Oil Presser Avocado Rapeseed Oil Press Machine Product Description Processing material: Fresh Avocado.အထွက်နှုန်း- 300kgs/hourကုန်ကြမ်းအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ- အညစ်အကြေးများ-<3%;ရေ: <15%ဦးစွာ လတ်ဆတ်သော ထောပတ်သီးကို ရေဆေးကာ အခွံမာသီးနှင့် အရေပြားကို ခွဲထုတ်ကာ အခွံမာသီးနှင့် အရေပြားကို ဖယ်ထုတ်နိုင်သောကြောင့် ပျော့ဖတ်ကို ကြိတ်ချေနိုင်ပြီး အဆီလမ်းကို တိုစေကာ အဆီများကို အလွယ်တကူ ညှစ်ထုတ်နိုင်ပါသည်...
စျေးအသက်သာဆုံး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော သစ်သီးခြောက်များ ပြီးပြည့်စုံသော Line Mango Kiwi နှင့် Cherry Dehydrator Line Steel Stainless Machines ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် Bubble thawing အဝတ်လျှော်စက် 1. Conveyor belt အရှည် 4000mm၊ ပန်းကန်၏အကျယ်မှာ 800mm ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းမှာ stainless steel 304 2. စုစုပေါင်း ပါဝါ 6.95 kw 3. Dimensions 4000*1600*1400mm Selection platform 1.Length 2500mm၊ PU belt 800mm 2.စုစုပေါင်းပါဝါ 0.75KW ဖြစ်ပါသည်။3. Dimensions 2500*1100*900mm အဝတ်လျှော်စက် 1. conveyor belt ၏ အရှည်မှာ 3000m...
ငှက်ပျောသီးကြော် Apple Chips အာလူးကြော် ကြက်သွန်ကြော်များ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ပြီးမြောက်သည်။
ငှက်ပျောသီးခွံလှီးဖြတ်စက် ငှက်ပျောသီးကို အခွံခွာပြီး လှီးဖြတ်ခြင်း ငှက်ပျောသီးအခွံခွာခြင်း နှင့် လှီးဖြတ်ခြင်းတို့ကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး လူအင်အားကို အထိရောက်ဆုံး သက်သာစေပါသည်။Hoist နှင့် Conveyor များသည် ပစ္စည်းများ နောက်လုပ်ငန်းစဉ်သို့ အလိုအလျောက် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။အာလူးကို လှီးဖြတ်ထားသော အာလူးများကို ရေဆေးပြီး မျက်နှာပြင်မှ ကစီဓာတ်များကို ဖယ်ရှားပါ။တုန်ခါခြင်းစခရင်သည် ငှက်ပျောသီးအချပ်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ပိုလျှံနေသော အစိုဓာတ်ကို ဖယ်ရှားပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် ငှက်ပျောသီးများ ကပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ပြီး ငှက်ပျောသီးများကို အညီအမျှ ဖြန့်ကျက်နိုင်သည်။အကြော်လိုင်း အအေးခံထားသော ငှက်ပျောသီးကြော်...
ဆီထုတ်ယူခြင်းမှ ဆီဖြည့်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းအထိ စားအုန်းဆီ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း Turnkey စီမံကိန်းကို အပြီးသတ်ပါ။
ဆီထုတ်ယူခြင်းမှ ဆီထုတ်ယူချိန်အထိ စားအုန်းဆီထုတ်ပိုးခြင်းမှ ပြီးပြည့်စုံသော စားအုန်းဆီထုတ်လုပ်မှုမျဥ်းကို ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းအထိ စားအုန်းသီးများ ရိတ်သိမ်းခြင်း အသီးများ အကိုင်းအခက်များကြားတွင် တင်းကျပ်စွာ ထုပ်ပိုးထားသော အသီးအနှံများ ပေါက်ရောက်ပါသည်။မှည့်သောအခါ ထန်းသီး၏အရောင်မှာ လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်သည်။အစုအဝေးကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အကိုင်းအခက်များကို ဦးစွာ ခုတ်ထစ်ရမည်။ထန်းသီးများ ရိတ်သိမ်းခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး ထန်းသီးစည်းများ ပိုကြီးလာသောအခါတွင် ပို၍ပင် ခက်ခဲသည်။သစ်သီးဝလံတွေကို စုဆောင်းပြီး သယ်ယူပို့...
Small Scale Semi အလိုအလျောက် အခြောက်လှန်းသော သစ်သီးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အစားအစာ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် အသုံးချမှုအခြေအနေများအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်းဖြေရှင်းချက်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ဤသစ်သီးခြောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းဆုံး တစ်နာရီလျှင် ကီလိုဂရမ်ဆယ်ဂဏန်းမှ တစ်နာရီလျှင် ကီလိုဂရမ်ထောင်ပေါင်းများစွာအထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဖောက်သည်၏ဘတ်ဂျက်အရ စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင် လတ်ဆတ်သော အသီးအနှံများကို ကောက်ယူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ အခြောက်ခံခြင်းနှင့် အနံ့အရသာခံခြင်း၊ ကြော်ခြင်း သို့မဟုတ် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ အလိုအလျောက် ဝေင...
Aseptic Packaging နှင့် Carton Packaging အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ထုပ်ပိုးမှုဖြင့် Soft Ice Cream ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Aseptic Packaging နှင့် Carton Packaging အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော ထုပ်ပိုးမှုနှင့်အတူ Soft Ice Cream ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 1. ကုန်ကြမ်းများကို လက်ခံခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်း- whey powder၊ stabilizers နှင့် emulsifiers၊ cocoa powder စသည်တို့ကဲ့သို့ အနည်းငယ်သာသော ပမာဏတွင် အသုံးပြုထားသော အခြောက်ခံပစ္စည်းများ၊ အိတ်များတွင်။သကြားနှင့် နို့မှုန့်များကို ဘူးများတွင် ပေးပို့နိုင်သည်။နို့၊ ခရင်မ်၊ နို့ဆီ၊ အရည် ဂလူးကို့စ်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီကဲ့သို့သော အရည်ပစ္စည်းများကို ရေနံတင်သင်္ဘောများမှ ပို့ဆောင်ပါသည်။2. ဖော်မြူလာ- The...
စက်မှုအလိုအလျောက်စည်သွတ်နာနတ်သီးစက် / စည်သွတ်နာနတ်သီးအချပ်များ / အတုံးများထုတ်ယူခြင်းလိုင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OEM မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-GT4571 အမျိုးအစား- စီမံဆောင်ရွက်မှု လိုင်းဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 3kw အလေးချိန်: 60 တန်ချိန် အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1380* 1200*2000mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO 9001,CE အာမခံချက်- 1 Year After-sales Service ပေးသည်- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ လုပ်ဆောင်ချက်- ဘက်စုံသုံးပစ္စည်း- 304 Stainless Steel Application- Root ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အကြောင်းအရာ- ...
မက်မွန်/သခွားသီး စည်သွပ်ဘူး ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်: JPF-GT1289 အမျိုးအစား- ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုလုံး ဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 0.75kw အလေးချိန်: 600kg အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1380 *1200*2000mm Certification: ISO Warranty: One Year After-sales Service Provided: ပြည်ပတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော စက်ယန္တရားများအတွက် အင်ဂျင်နီယာများ ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Peach/သခွားသီးစည်သွပ်ဘူး ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း လျှောက်လွှာ- ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများ ...
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-MG001 အမျိုးအစား- စီမံဆောင်ရွက်မှု လိုင်းဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 3kw အလေးချိန်: 80 တန် အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1380* 1200*2000mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO 9001,CE အာမခံချက်- 1 Year After-sales Service Provided- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ကုန်ပစ္စည်းအမည်- အလိုအလျောက် စည်သွတ်ဘူးမှိုစက်များ စက်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်- ထုတ်ယူခြင်း လျှောက်လွှာတင်ခြင်း...
အလိုအလျောက် စည်သွတ်ဘူးသီးများ ထုတ်လုပ်မှု စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းလိုင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-JZ001 အမျိုးအစား- စီမံဆောင်ရွက်မှု လိုင်းဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 3kw အလေးချိန်: 80 တန် အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1380* 1200*2000mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO 9001 အာမခံ- 1 Year After-sales Service Provided- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ထုတ်ကုန်အမည်- အလိုအလျောက် စည်သွတ်ဘူးများ ပြုပြင်ခြင်း လိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်- ထုတ်ယူခြင်း လျှောက်လွှာ- အော်တို...